Gbasara Anyị - HEBEI HEX IMP. & EXP. Ụlọ ọrụ
Tradional Chinese ahịhịa
Ọgwụ Tradional China
Mkpụrụ osisi na ifuru ifuru
HEBEI HEX IMP. & EXP. COMPANY bụ ụlọ ọrụ lekwasịrị anya na mbupụ ahịhịa akụrụngwa, na mbido ahịhịa, ahịhịa osisi, tii ifuru, ahịhịa ahịhịa, ahịhịa anụmanụ, mmeju ahụike ndị sitere n'okike. A na-eji ọgwụgwọ ọdịnala ọdịnala eme ihe dị ka nlekọta ahụike kachasị n'akụkụ ụwa niile ruo ọtụtụ narị afọ. Mkpụrụ osisi ndị a sitere na osisi, okooko osisi, na ahịhịa ndị a hụrụ n'ọhịa wee bụrụ ndị a kụrụ maka ihe ọgwụgwọ ha ruo ọtụtụ afọ.
HEBEI HEX IMP. & EXP. Plọ ọrụ na-eji nnọọ nlezianya ahọpụta ahịhịa na ihe ọkụkụ. nwekwara ụlọ ọrụ na-enweghị mmetọ na-enweghị mmetọ na nhazi nke ọgwụ ndị China ọdịnala (TCM). Ebupula ahihia ndia na ahihia ya otutu mba dika Japan, Korea, USA, Africa na ndi ozo.
Nchedo, ịdị irè, ọdịnala, sayensị, na ọkachamara bụ ụkpụrụ nke HEX kwenyere na nkwa maka ndị ahịa.
HEX na-ahọrọ ndị nrụpụta nke ọma ma na-enyocha usoro njikwa njikwa maka ngwaahịa anyị.
Isi osisi ndị ebupuru na Japan bụ mgbọrọgwụ Licorice, Ginseng, Radix Saposhnikoviae, Radix Scutellariae. Radix Bupleuri, Red Dates na wdg. Ndị a herbs ruru eru na Japanese ụkpụrụ na arọ ọla na pesticide residues.
Enwere ihe karịrị ahịhịa mkpuru osisi atọ na-ebupụ na USA. Enwere ike ịkọwa ha dị ka Ọgwụ Omenala China na Ọgwụ China Ọgbara Ọhụrụ. Omenala Chinese Ọgwụ bụ ngwaahịa chepụtara na ọgwụ gboo ọgwụ mgbe ochie dị ka Liuwei Dihuang Erere, Zhibai Dihuang Erere, Xiaoyao Erere, Jinkui Shenqi Erere, Bazhen Erere, Guipi Erere na wdg Modern Chinese ọgwụ bụ herbal ngwaahịa arụpụtara na oge a na nkà mmụta sayensị echiche na usoro ọgbara ọhụrụ.
HEX ga-aga n'ihu na-ewebata akara akara, nke sayensị gosipụtara, yana nke a na-emepụta ihe mgbakwunye ahụike na ahịhịa na ahịa niile ụwa. Anyị na-anabata ndị na-ere ahịa niile, ndị na-ere ahịa ahịa, ndị ọkachamara na ụlọ ọgwụ ka ha kpọtụrụ anyị maka ọrụ ndị ọkachamara anyị.
Anyị dị nso na obodo Anguo, ahịa ọgwụ kachasị ukwuu n'ụwa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ahịhịa china niile nwere ike ịchọta ebe a.
anyị mgbe niile agbasoro n'echiche nke "ezi obi, ntụkwasị obi na ịchụso ịdị mma".
Anyị raara onwe anyị nye inye ndị ahịa anyị ọrụ dị mma na nke bara uru.
Anyị kwenyesiri ike na anyị nwere ike ime nke ọma n'ọhịa a ma na-ekele gị nke ukwuu maka nkwado ndị ahịa anyị a ma ama!